Jesse Lingard Oo Ku Maadsaday Dabaaldegii Uu CR7 Sameeyay Xalay Markii Uu Gool Ka Dhaliyay Man United Isagoo Sawirkaan Instagram Soo Dhigay | Laacib.net
Jesse Lingard Oo Ku Maadsaday Dabaaldegii Uu CR7 Sameeyay Xalay Markii Uu Gool Ka Dhaliyay Man United Isagoo Sawirkaan Instagram Soo Dhigay
08-11-2018 Saed Balaleti 1
Cristiano Ronaldo ayaa xalay ka careysiiyay jamaahiirta kooxdiisa hore ee Manchester United kaliyana ma aheyn inuu si weyn u dabaaldegay markii uu gool ka dhaliyay laakiin sidoo kale hadaladii uu yrii ciyaarta ka dib.
Ronaldo ayaa hogaanka u dhiibay kooxda Turin ka dhisan isagoo dabaaldeg weyn sameeyay islamarkaana murqaha calooshiisa u bandhigay taageerayaasha kooxdiisa hore.
United ayaase soo kabsasho xilli danbe ah sameysay ka dib laad xor ah oo uu ciyaarta ku barbareeyay Juan Mata iyo gool uu iska dhaliyay xiddiga Juventus ee Sandro.
Ronaldo ayaa ciyaarta ka dib waxa uu sheegay in kooxdiisa Juventus ay u qalantay inay afar gool dhaliyaan islamarkaana Man United ay ku tashaneysay kaliya kubadaha laadadka xorta iyo koornooyinka sida ay sameeyaan buu yiri inta badan kooxaha Ingariiska.
Xiddiga Man United Jesse Lingard ayaana bogiisa Instagram soo dhigay sawir uu ku durayo dabaaldegii uu Ronaldo sameeyay xalay.
Madaama uu xiddiga reer Portugal murqaha calooshiisa ugu faanay jamaahiirta United, Lingard ayaa markii ay kooxdiisa badisay ka dib waxa uu isna barbardhigay sawir uu banaanka keenay murqaha calooshiisa isagoo ciwaan uga dhigay: “Kumaa si wanaagsan u sameeyay?”
09-11-2018 at 3:00 pm
Cr7 ayaa si fcn usameeye dabal dagan lingard maxu wax sameyn ka ogyahey till he die magarayo cr7😂😂